Tattoo-ga masar ee Masar, astaanta abuurista iyo soo ifbaxa | Tattoo
Tattoo Masaarida ah, astaanta abuurista iyo soo ifbaxa nolosha
Susana godoy | | Tattoos Xayawaan ah
El tattoo-ga Masar ee loo yaqaan 'scarab tattoo' Waxay caan ku tahay dadka jecel dhaqanka Masaarida ama cayayaanka noocan ah. Sababtoo ah waxa lamid ah astaan ​​iyo macno leh taasi oo laxiriirta astaantan, waxay kasbatay meel ku taal jirka dad badan oo khad jecel. Marka hore iyo in la fahmo caan ka ah tattoo-ga Masar ee loo yaqaan 'scarab tattoo', waa inaan dib ugu noqonaa Masar hore.
Scarab wuxuu ahaa cayayaan muqadas u ah Masaaridii hore. Dhaqankaas, xaqiiqda ah in kuwa lamid ah digo ay ku qaadi karaan kubbadaha digada xaaladaha adag ee lamadegaanka si ay hadhow u aaseen oo ay markii dambe ubadkoodu uga soo baxeen (tan iyo markii ukumo la dhex dhigay kubbadaha digada) abuur iyo soo bixid nololeed.
Intaa waxaa dheer, Masriyiintii hore, duqsigu wuxuu kaloo xiriir la lahaa dhaqdhaqaaqa qorraxda iyo wareegyada nolosha. Waana sababtaas sababta dad badan oo xilligaas ahaa ay dhabarkooda ugu soo qaateen beetle xanbaarsan qorraxda cadceedda ku shaqaysa. Matalaad wareegga qorraxda ee samada. Xaqiiqdii, waxaa loogu talagalay Dhaqanka Masaarida, scarab wuxuu xiriir dhow lalahaa waaberiga wuxuuna xiriir lalahaa Ilaaha reer Masar "Khepri", oo sidoo kale loo yaqaan "ilaaha qorraxda soo baxda".
Waqtigaas, Masriyiintii waxay ku xardheen lamid ah dhagaxa si ay ugu xidhaan inay ahaadaan qaamuus ilaaliya. Waxa kale oo la isticmaalay shaabado Royal ah oo qaab scarab ah. Taasi waa sababta, maanta, markii la helo hooyada meydka ku duugan, waa wax caadi ah in la helo dambasyo u eg qaab lamid ah ama tixraac qaar ka mid ah cayayaanka xurmada leh iyaga.
Iyada oo astaamahan oo dhan, waxaan si fiican u fahmi karnaa sii kordheysa caannimada tattoo-ga Masar ee loo yaqaan 'scarab tattoo'. In xiga maktabadda Tattoos waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo badan oo sawir gacmeedyo ah oo lagu sameeyo qaabab kala duwan.
1 Noocyada Tattoos-ka Masar
1.2 Loogu talagalay dumarka
1.4 Oo leh baalal
2 Halkee laga helaa tattoo-ga Masar ee 'scarab tattoo'
3 Sawirada Tattoo Masar ee Scarab
Noocyada Tattoos-ka Masar
Sida mid ka mid ah calaamadaha ugu caansanWaa run inaan ka heli karno cabbirro kala duwan. Markii aan ka hadlayno tattoo yar, minimalism iyo dhadhan fiican ayaa had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca. Marka kiiskan gadaal nagama tagayo. Kuwa yaryari sidoo kale waxay wataan astaamaha oo dhan, laakiin waa run inaan ku dari karno meelaha kale ee jirka sida anqawyada, curcurada ama xusullada iyo dhegaha gadaashiisa. Taabasho xarrago leh oo aanaan ilaabi karin.
Haddii tattoo loogu talagalay jirka haweeneyda, waa run inaad adiguna haysatid dhowr ikhtiyaar oo aad kala dooran karto. Laakiin shaki la'aan, midka ugu muuqda qaabkan aagga xabadka dhexe. Waa run in sidoo kale garbaha garbaha ama qoorta, ay yihiin meelo kale oo ka mid ah meelaha lagu muujiyo. In kasta oo khad madow had iyo jeer noqon doono saaxiibkeen aaminka ah, xaaladdan waxaad sidoo kale ku dari kartaa taabashada buluug, casaan ama cagaar ah si aad ugu darto asal ahaan asal ahaan, haddii ay suurogal tahay.
Inkasta oo dumarka qaar ay waliba xirtaan, ragga ayaa doorbida kuwa aagga dambe si loo muujiyo astaamaha ugu ballaaran. Naqshadeynta ka bixi kara hal dhinac oo garbaha garbaha ah dhinaca kale. Laakiin sheydu sidaas maahan maxaa yeelay tatuuraha beenta Masar ayaa sidoo kale lagu arkaa gacmaha iyo sidoo kale gacmaha ama xitaa bowdyaha. Dabcan, sida caadiga ah waxay noqon doontaa khad madow oo la socda. Midkee ayaad jeceshahay
Oo leh baalal
Garbihiisa ayuu noogu soo bandhigayaa ilaalin weyn. Mid kale oo ka mid ah astaamaha waaweyn ee nooca noocan ah. In kasta oo ay run tahay in baalasha ay sidoo kale tilmaami karaan xorriyad markaan ku aragno iyaga naqshadaha kale. Way na daboolaan oo waxay na siiyaan nolol badan isla waqtiga awoodda. Noocyada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu dhammaystiri karaa midabbo, lagu daray astaamaha Masaarida ama khad madow.
Halkee laga helaa tattoo-ga Masar ee 'scarab tattoo'
Markaynu ka hadlayno laabta, waa run inay ka mid tahay shiraacyada waaweyn ee jidhka. Waxay doorbidaan inay ka dhigaan wax yar laakiin waxay doortaan a naqshad jilicsan taas oo sidoo kale ku habboon ku biiritaanka aagga dhexe. Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin inay tahay naqshad dhammaystiran oo dhammaystiran oo leh cabbir ballaadhan. Laakiin haddii aad doorbido, waxaad had iyo jeer dooran kartaa fikradaha kale ee yaryar ee aad dhigi doontid
Ma jeceshahay qoorta qoorta? Waa hagaag kan sidoo kale. Nabarradii Masaarida ayaa u timid inay qurxiso mid kale oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee jirkaaga. Taasi waa sababta ay u jiraan dad badan oo doorta naqshad weyn qaybta dhexe iyo hore ee ka mid ah. Laakiin mararka qaarkood, waxaan sidoo kale ilaalin karnaa sida nape ay wax badan u dhahdo. Waxaad u dooran kartaa naqshad aaggan ama ka sii wanaagsan, dhegaha gadaashiisa. Qoorta iyo hareeraheeda ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu habboon ee lagu soo dhaweynayo tattoo sida gaarka ah iyo mudada dheer sida kan la sheegay.
Sawirada: soldecaribe.tumblr.com, tattoofilter, Pinterest,
Sawirada Tattoo Masar ee Scarab
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo Masaarida ah, astaanta abuurista iyo soo ifbaxa nolosha
Tattoo-yada naxdinta leh, sida looga fogaado inay ku dhammaato mid
Daloolin ka hortagga Antitragus